काठमाडाैं उपत्यकामा १ सय २४ जना कोरोना संक्रमित , ‘ट्रावल हिस्ट्री’ नभएका १२ जना – Health Post Nepal
२०७७ असार १८ गते ९:१६
कैलालीमा ४४ जनामा कोरोना पुष्टि
नेपालमा कोरोना संक्रमित १७ हजार नाघे
‘बाग्लुङमा आतंकित हुनुपर्ने स्थिति छैन’
‘कोरोना संक्रमण जोखिम नियन्त्रण गर्न सरकारले युद्धस्तरमा काम गरोस्’
बागलुङबाट बसमा १७ दिन अगाडि आएका थिए पर्साका नयाँ संक्रमित
देशभर कोरोना भाइरसको संक्रमित संख्या बढ्दै जाँदा उपत्यकाभित्र पाइएका संक्रमितको स्रोत यकिन नभएको पाइएको छ । त्यस्ता केसहरू दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ ।
बढी जनघनत्व भएका कारण संवेदनशील सरकारले उच्च सावधानी अपनाएका तीन जिल्लामै हालसम्म संक्रमितको संख्या १ सय २४ पुगिसकेको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकुले जनाएको छ।
केही दिनयता काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढिरहेको पाइएको छ । बुधबार मात्रै उपत्यकामा १७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। जसअनुसार काठमाडौंमा १०, ललिपुरमा ५ र भक्तपुरमा २ जनामा सक्रमित थपिएको छन्।
यो समाचार तयार पर्दासम्म उपत्यकाभर १ सय २४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
वाग्मती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा ८२, ललितपुरमा १५ र भक्तपुरमा २७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको तथ्यांक छ।
त्यसमध्ये ५९ महिला र ६५ पुरुष रहेका छन्। अहिले उपत्यकामा रहेका संक्रमित जोरपाटी, नयाँबस्ती, धापासी, ठमेल, बालाजु, कपन, चन्द्रागिरि, साँखु, गोकर्णेश्वर, बबरमहल, सिनामंगल, टेकुलगायतका ठाउँमा बसोबास गरिरहेका व्यक्ति रहेका छन् ।
१२ जनामा संक्रमणको कहाँबाट देखियो पुष्टि भएन
हालसम्म देखिएका संक्रमितमध्ये १२ जनाको संक्रमण को र कहाँबाट सरेको भनी हालसम्म पुष्टि नभएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले बताए।
अहिले ट्राभल हिष्ट्री नभएका र संक्रमणको स्रोत पत्ता नलागेकोले केस देखिनेको थालेको छ। त्यसमा काठमाडौंका ७, भक्तपुरका ३, ललितपुरका २ जना रहेका छन्।
‘सोमबार ललितपुरको भैंसीपाटीमा अढाइ वर्षे बालकमा संक्रमण देखियो तर ती बालकमा कसरी संक्रमण देखियो भनी पुष्टि हुन सकेको छैन,’ पाण्डेले भने ।
उनका अनुसार ती बालकका बाबु कुरियर सेवामा काम गर्ने गरे पनि बाहिर गएको हिस्ट्री नभएको र उनको थप परीक्षण भइरहेको छ।
त्यसैगरी, मगंलबार शंखमूल बस्ने एक गर्भवतिमा समेत कोरोना संक्रमण देखिएको र उनीको कुनै ट्राभल हिष्टी नभएको महाशाखाले जनाएको छ। यस्ता केसहरु दिनप्रति दिन बढिरहेको महाशाखाले जनाएको छ।
उपत्यकामा जनघनत्व भएका कारण संक्रमण फैलिएमा भयावह रूप लिनसक्ने डा. पाण्डेको भनाइ छ। संक्रमण फैलन नदिनका लागि कन्ट्रयाक ट्रेसिङको काम तीव्र पारिरहेको उनले बताए।
उनका अनुसार धेरैजसो कुवेतबाट आएका तथा भारतको दक्षिणको नाका हुँदै उपत्यका भित्रिएका मानिसमा संक्रमण देखिएको हो।
किन लुकाइन्छ उपत्यकाभित्रका केस?
सरकार भने उपत्यकाभित्रै बढ्दो संक्रमण दर खुलाएमा त्रास र आलोचना बढ्ने भन्दै सम्बन्धित निकायहरूले संक्रमितको विवरण सकेसम्म लुकाउने गरेका छन्।
मन्त्रालयको नियमित कोरोना ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले संख्या मात्रै उल्लेख गर्ने गरेका छन् तर, आधिकारिक रुपमा यो स्थानमा संक्रमण भेटिएको हो जानकारी दिने गरेका छैइनन।
हेल्थपोस्ट नेपालले उपत्यकाभित्रको हालसम्म संक्रमणको विवरण माग गर्दा कुनै पनि सम्बन्धित निकाय २ दिनसम्म विवरण दिन तयार भएनन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र काठमाडौं स्वास्थ्य कार्यालयले संक्रमितको बसोबास ठेगाना सार्वजनिक गर्न नहुँदै भन्दै विवरण दिन तर्किए ।
जिल्लाअनुसार के कति संक्रमण छ भनेर भन्न सकिने तर स्थानअनुसार विवरण दिन नसकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए।जिल्लाभन्दा तलको रेकर्ड राख्ने नभएका कारण थप विवरण उपलब्ध नहुने उनले बताए।
‘मन्त्रालयबाट यो विवरण उपलब्ध हुन गाह्रो रहेको छ। यसका लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र प्रदेशमा बुझ्नुहोस्,’ डा. अधिकारीले भने।
हामीले यसबारे थप बुझ्नका लागि काठमाडौं स्वास्थ्य कार्यालयमा सम्पर्क राख्यौं। उक्त कार्यालयकी प्रमुख सिर्जना श्रेष्ठ भने अन्य कर्मचारीबाट विवरण उपलब्ध हुन्छ भन्दै पन्छिइन्।
‘म अहिले अन्य काममा नै व्यस्त छु। कोरोनाको विषय हेर्ने पवित्रा विष्ट हुनुहुन्छ। उहाँबाट लिनुस्,’ प्रमुख श्रेष्ठले भनिन् । सूचना दिने भएकी विष्टलाई सम्पर्क गर्दा उनी पनि तर्किइन्।
स्वास्थ्य कार्यालयकी कर्मचारी विष्टले यो विषयमा आफूले बोल्न नमिल्ने र विवरण दिन स्वीकृत नदिइएको बताइन् । उनले पनि कार्यालय प्रमुखसँग नै बुझ्नका लागि आग्रह गरिन्। तर, दुई दिनसम्म श्रेष्ठ सम्पर्कविहीन भइन्। महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य कार्यालयको भूमिका निरीह नै बन्न पुगेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ– लकडाउन खुकुलो भएसँगै काठमाडौंमा जोखिम थपिँदै छ
काठमाडौं जस्ता घनाबस्तीहरूमा कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन्। लकडाउन खुकुलो भएसँगै मानिसको भीडभाड बढेको आवश्यक सावधानी नअपनाएको हुँदा संक्रमण फैलिरहेको उनको भनाइ छ।
अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर नस्किन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। घरबाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा दुई मिटरको दूरी कायम गर्न तथा अनिवार्य माक्सको प्रयोग गर्न डा. गौतमले सुझाए।
Tags: उपत्यका, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)